Shiinaha TY230-3 Soosaaraha Bulldozer iyo Alaab-qeybiye | Xuanhua
TY230-3 cagaf cagaf waa semi-adag adag, wareejinta Haydarooliga, cagafta gacanta ku hay cagaf nooca cagaf. Planetary, gudbinta wareejinta awooda taas oo Unilever ay maamusho. Nidaamka hawlgalka ee loogu talagalay iyadoo loo eegayo injineernimada aadanaha iyo mashiinka ayaa ka dhigaysa hawlgal si fudud, waxtar leh oo sax ah.
TY230-3 cagaf cagaf waa semi-adag adag, wareejinta Haydarooliga, cagafta gacanta ku hay cagaf nooca cagaf. Planetary, gudbinta wareejinta awooda taas oo Unilever ay maamusho. Nidaamka hawlgalka ee loogu talagalay iyadoo loo eegayo injineernimada aadanaha iyo mashiinka ayaa ka dhigaysa hawlgal si fudud, waxtar leh oo sax ah. Awood xoog leh, qaab ciyaareed aad u fiican, waxtarka hawlgalka sare iyo aragti ballaadhan ayaa muujinaya astaamaha faa'iidooyinka. Ikhtiyaariga ah waxaa ka mid ah U-blade (Awood 8.1m), saddex ripper, ROPS iyo qalab kale. Waa dookhaaga ugufiican dhismaha wadada, dhismaha hydro-korontada, dib u habeynta goobta, dhismaha dekedda, horumarinta miinooyinka iyo dhismooyinka kale.
Miisaanka hawlgalka (oo ay ku jiraan ripper) (Kg): 24840
Cadaadiska dhulka (oo ay ku jiraan ripper) (KPa): 76
Qiyaasta raadadka (mm): 2000
Min. nadiifinta dhulka (mm): 405
Awoodda seexinta (m): 7.8
Balladda daab (mm): 3666
Qiyaasaha guud (mm): 573336663380
Awoodda duufaanta (KW / HP): 169/230
Ugu badnaan Xuddunta (Nm / rpm): 1050/1400
Isticmaalka shidaalka ee la qiimeeyay (g / KWh): 217
Goobta (mm): 216
Horan (Km / h) 0-3.8 0-6.8 0-11.8
Dib udhac (Km / h) 0-4.9 0-8.5 0-14.3
Ugu badnaan cadaadiska nidaamka (MPa): 19.1
Soo saarista nidaamka L / min: 194
Hore: T160-3 Cagaf-cagaf
Xiga: TY320-3 cagaf